Ukushayela kungaba umsebenzi owesabisa kakhulu, nazi izeluleko ezi-4 zokugwema ukucindezela - I-Tamban RELAY
Ukushayela kungaba umsebenzi owesabisa kakhulu, nazi izeluleko ezi-4 zokugwema ukucindezela
By brylandobe On UJul 27, 2020
Ukushayela kungaba ukwethusa kakhulu futhi kube njalo kakhulu lapho usanda kuqala ukufunda. Nazi izeluleko ezi-4 zokucindezela ngesikhathi sokushayela!
Ukufunda ukushayela kuyisisusa sangempela, njengoba ungazicabanga nje ushayela nezinwele zakho emoyeni ukuvakashela abangane bakho. Isibonakaliso sangempela senkululeko njengoba sinomuzwa wokuthi izingqinamba manje seziyingxenye yesikhathi esedlule. Ngeshwa, ukuthola ilayisense, kufanele udlule esigabeni esinzima sokushayela amahora. Uma kwabanye, lokhu kuwukuxazululeka okusonjululwa ngokushesha, kwabanye kuyinkambiso yangempela eqala njengoba ukucindezela kwabo kubambezela ukufunda kwabo kuze kube sezingeni lokubalulaza. Uma kunezindlela zokuhlaziya kabusha ngesikhathi sokuhlaselwa kokukhathazeka, nazi izeluleko ezi-4 zokuqeda ukucindezeleka ngezikhathi zokushayela.
Zama ukulungisa ukushiyeka kwakho kusengaphambili
Isikweletu: Art Markiv nge-Unsplash
Ukucindezelwa kuvame ukungalawulwa, kepha kuvame ukulawulwa ngaphezulu lapho ungaziqinisa ngokwakho. Uma ubona ukuthi uxabana ngokungananazi ne-niche, isibonelo, zama ukufunda inqubo ngevidiyo ku-YouTube. Ngempela, bonke abafundisi abanayo indlela efanayo futhi mhlawumbe uzokwazi ukuqonda kangcono ngokufunda okuhlukile. Zama ukulwa nokwesaba kwakho ngomlilo ngokubhekana nakho emcabangweni ngaphambi kokukusebenzisa. Ngenhlanhla encane, ukuba nemithetho engqondweni kuzokuvumela ukuthi wehlise umoya futhi usondele esifundweni ngokuzola okwengeziwe.
Xhumana nomfundisi wakho
Kulula ukusho kunokukwenza, kepha kuyisisekelo sokufunda ngempumelelo. Uma unomuzwa wokuthi indlela esetshenziswa ngumfundisi wakho ayikufaneli, unganqikazi ukumtshela. Ukhona lokho. Ngemuva kwakho konke, ukufunda ukushayela kuqhele kakhulu ngokwemvelo yingakho kufanele uzibekezelele.. Kujwayelekile ukuba nobunzima futhi kuyindima yomfundisi wakho ukukusiza ukuthi uzethembe. Ngaphezu kwakho konke, uma okwamanje kungahambi nhlobo, cela ukuguqula ukufundisa ngokukuthinta ngqo esikoleni sakho sokushayela. Kungcono ukubuza kunokuchitha isikhathi!
Shayela nomuntu omthandayo
Isikweletu: U-Easton Oliver nge-Unsplash
Lesi yisisombululo esingaxazulula zonke izinkinga zakho! Uma uzizwa sengathi awukwazi ukuhlangana nomfundisi futhi ugcizelela kakhulu kangangokuba ucishe uzizwe sengathi ufuna ukuyeka, cabanga ukuqasha imoto ehambisana nambili. Okokuqala, intengo enenzuzo kakhulu bese, ukushayela nomuntu omthandayo kuzokuvumela ukuba ukhululeke impela futhi mhlawumbe uzokwazi nokuzethemba. Ngempela, njengoba ezokwazi kahle, uzokwazi ukubuza imibuzo ngokukhululekile futhi uzizwe ulalele kakhudlwana. Imininingwane ebalulekile!
Okokugcina, unganqikazi ukuzitshela ukuthi uyakwazi ukuyenza yize ungabaza futhi unezinkathazo. Zitshele ukuthi uzonqoba ukucindezela kwakho nokuthi ungcono kakhulu. Kungase kuzwakale kushiwo njengokushubile kodwa ngokukuphinda kuwe, kuzogcina sekwenza umehluko ngokungazwisisi. Thatha imizuzu embalwa ngaphambi kwesikhathi ngasinye ukuze uzibuke esibukweni uzitshele ukuthi ungakwenza nokuthi uyakwazi ukuzithuthukisa kodwa futhi ngaphezu kwakho konke lokho unelungelo lokwenza amaphutha ngoba usengumfundi. Ngenkathi silinde ukunqoba ukwesaba kwakho.
Le ndatshana yavela okokuqala ku: https://trendy.letudiant.fr/permis-4-tips-pour-eviter-de-stresser-pendant-les-heures-de-conduite-a4896.html
Ukushayela kungangethusa kakhulunazi izeluleko ezi-4 zokugwema ukucindezela
I-xnxx: Nakhu ukuthi Ungayihlanza Kanjani Impilo Yakho Yobulili Ngokuzijwayeza
Nawa amathiphu ethu wokuqalisa emsebenzini wakho omusha.